बलात्कार र यौन दुर्व्यवहारको घटना : अधिकांश पीडित महिलाले बयान फेर्छन्- फिचर - कान्तिपुर समाचार
बलात्कार र यौन दुर्व्यवहारको घटना : अधिकांश पीडित महिलाले बयान फेर्छन्
पुस ३, २०७६ रासस
दाङ — अठ्ठाइस वर्षीया अपाङ्गता भएकी महिलालाई राप्ती गाउँपालिका–१ का २१ वर्षीय समिर अलीले बलात्कार गरेको भन्दै पीडित पक्षले ०७५ पुस १८ गते इलाका प्रहरी कार्यालय भालुवाङमा उजुरी दिए । घरमा सुतिरहेको अवस्थामा गत वर्ष पुस १७ गते राति जबर्जस्ती करणी गरेको पीडितले बताइन् । पीडितको स्वास्थ्य परीक्षणपछि प्रहरीले पुस १८ गते गिरफ्तार गरी जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा चलायो । जिल्ला अदालतले ०७६ असार ९ गते आठ वर्ष कैद गर्ने फैसला गर्‍यो ।
पाँच वर्षीया बालिकालाई ०७५ माघ १६ गते घोराही उपमनपा–२ का १८ वर्षीय मुकेश विकले बलात्कार गरेको भन्दै पीडित पक्षले माघ १६ गते नै प्रहरीमा उजुरी दिए । फकाएर खोलामा लगेर बलात्कार गरेको खुल्न आयो । रक्तश्राव भएपछि पीडित बालिकाको उपचार तथा स्वास्थ्य परीक्षण भयो । प्रहरीले आरोपितलाई माघ १६ गते नै गिरफ्तार गरी जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा चलायो । जिल्ला अदालतले ०७६ वैशाख २७ गते दोषी ठहर गर्दै १६ वर्ष कैद र पीडितलाई स्थानीय तहबाट रु ५० हजार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने फैसला गर्‍यो ।
अनौपचारिक सेवा केन्द्र (ईन्सेक) सार्वजनिक गरेको नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२० मा विगत एक वर्षमा दाङमा महिलामाथि बलात्कार, बलात्कारको प्रयास र यौन दुर्व्यवहारका ६९ घटना भएको उल्लेख छ । इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधि जेएन सागरका अनुसार प्रहरी, प्रशासन, अदालत, सरकारी वकिल कार्यालय, न्यायिक समिति, ओसिएमसी, ओरेक, जिल्लास्तरीय सेवा केन्द्र, पत्रकार तथा स्वयं पीडितकै माध्यमबाट भएका घटनाको सत्यतथ्य विवरण सङ्कलन र अभिलेखीकरण गरिएका घटना हुन् । इन्सेककका अनुसार बलात्कारजस्ता घटनामा मिलापत्र भएको छ भने केहीले निवेदनसमेत दिएनन् । दिएकाले बयान फेर्ने क्रम बढ्दो छ ।
जिल्लामा भु्रण हत्याका तीन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका पाँच, आत्महत्या दुरुत्साहनका दुई, कथित बोक्सी आरोपमा तीन, उपचारमा लापरवाहीको चार, बन्द÷हडताल÷तालाबन्दीको १५, हत्या प्रयास एक, कुटपिटको ५३, बेवारिसे शवको चार, नागरिक बेपत्ताको एक, जातीय विभेद्को एक, बम विस्फोटको एक, आगजनीको तीन, बहुविवाहको एक, अपहेलनाको २२, दुव्र्यवहारको आठ, अपहरणको तीन, घर निकालाको एक, ज्याला ठगीको एक वटा घटना भए । इन्सेकका अनुसार जिल्लामा जम्मा २२४ वटा घटनामा २४२ पीडित बने ।
प्रतिवेदनले १७९ घटना गैरराज्य, ३५ राज्य र १० घटना अज्ञात पक्षबाट भएको देखाएको छ । तीमध्ये १७२ महिलासहित २४२ जना पीडित भएका थिए भने ४२ बालिका बलात्कारमा परेका थिए । प्रकाशित : पुस ३, २०७६ १३:१६
यस्ताे सैलुन जहाँ पुस्तक पढ्दा पाइन्छ छुट
पुस ३, २०७६ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — कपाल कटाउन सैलुन जानुहुन्छ ? कहिलेकाहीँ पालो पनि कुर्नु पर्छ होला । आफ्नो पालो नआउञ्जेल के गर्ने ? टेलिभिजनमा फिल्म, सिरियल वा केही हेरेर समय बिताउने कि ? सैलुनमा राखिएका विभिन्न स्वरुपका ‘हेयर स्टाइल’ पो हेर्ने कि ?
हामीले गर्दै आएको त त्यही नै हो । तर भारतको तमिलनाडुको तुटिकोरिन जिल्लामा रहेकाे एउटा सैलुन भने अलि फरक छ ।
पन मरिअप्पनले सञ्चालन गरेकाे सैलुनमा एक हजार ५ सयभन्दा बढी पुस्तक राखिएको छ । साथै उनकाे सैलुनमा विभिन्न पत्रिका र म्यागजिन उत्तिकै‌ संख्यामा छन् । पालो पर्खिरहेका ग्राहकलाई उनी पुस्तक पढ्न प्रेरित गर्छन् । उनको सैलुनमा हिरो हिरोइनका पोस्टर पनि राखिएको छैन । उनले गीत पनि बजाउँदैनन् । गीत बजाउँदा पढिरहेका व्यक्तिलाई डिस्टर्ब हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छन् उनी ।
जसले १० पेजभन्दा बढी पढ्छ, त्यसलाई उनले ३० रुपैयाँ छुट पनि दिन्छन् ।
पछिल्लो समय पुस्तकले भरिएको उनको सैलुनकाे तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ ।
प्रकाशित : पुस ३, २०७६ १२:५६